မြန်မာဘုရင်လက်အောက် ၁၈၄၆ရန်ကုန်မြို့ရှိမွတ်စ်လင် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် သုံးခုနှင့်မွတ်စ်လင်သင်းချိုင်းပါဝင်တဲ့ မြေပုံ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« LYC Dr. Daw Nwe Nwe Tint and I (2)
Dear Nan letter No9»
မြန်မာဘုရင်လက်အောက် ၁၈၄၆ရန်ကုန်မြို့ရှိမွတ်စ်လင် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် သုံးခုနှင့်မွတ်စ်လင်သင်းချိုင်းပါဝင်တဲ့ မြေပုံ
Source FB of Maung Khin
မြန်မာဘုရင်လက်အောက် ၁၈၄၆ရန်ကုန်မြို့ရှိမွတ်စ်လင် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် သုံးခုနှင့်မွတ်စ်လင်သင်းချိုင်
ဟိုတနေ့က ကို အတီး ဝါးလုံးရှည် ရဲ့သာယာဝတီမင်း(ခ) ရွှေဘိုမင်း လက်ထက်(၁၈၃၇-၁၈၄၆) ရန်ကုန်မြို့ မြေပုံကို တွေ့လိုက်တော့ အလွတ်တန်းသတင်းထောက်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလ်ကတ္တား အင်ဂျီနီယာကောလိပ်က ပုံဆွဲပါမောက္ခ မစ္စတာ ဂရန့်ရဲ့ ၁၈၄၆, ၁၄ သြဂုတ်မှ ၆ စက်တင်ဘာ ရန်ကုန်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်အတွင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့အနှံ့မှတ်တမ်းတင်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူကအင်ဂျီနီယာပုံဆွဲဆရာဆိုတော့ အဲ့ဒီအချိန် မြန်မာမင်းများလက်အောက်က ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကို ခဲတံတစ်ချောင်းနဲ့ ပုံဖေါ်သွားပါတယ်။ သူ့လည်းသူလျှိုဆိုပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အကြောင်းလည်းဖတ်မိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကိုအတီးပြောတဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် သုံးခုအပြင် မွတ်စ်လင်သင်းချိုင်းနဲ့ အင်္ဂလိပ်သင်းချိုင်းကိုလည်း သူ့မြေပုံထဲမှာတွေ့မိတယ်။ အခုလက်ရှိဘယ်နေရာလောက်မှာရှိမလဲဆိုတာတော့မသိဘူးဗျ။အာမေနီးယန်း၊မဂို၊ဂျူး၊ဥရောပတိုက်သားတွေသာမက ဒိုဘီ (Dhobees) အဝတ်လျှော်တဲ့လူတွေကိုပါအဲ့ဒီအချိန်ထဲက ရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ခဲ့ကြောင်း တရုတ်အဝတ်လျှော်တဲ့လူတွေလည်းရှိကြောင်းရေးထားခဲ့ပါသည်။ သူကတော့ ရွှေတိဂုံဘုရားဝန်းကျင်ကိုသာယာဝတီမင်းတည်ခဲ့တဲ့ မြို့သစ်လို့ ဖေါ်ပြထားပြီး ဆူးလေးဘုရားဝန်းကျင်ကို မြို့ဟောင်းလို့ခွဲပြီးရေးဆွဲထားခဲ့ပါသည်။ အဲ့ဒီခေတ် အဲ့ဒီကာလက ရန်ကုန်အခြေချလူဦးရေ နဲ့ ရန်ကုန်နယ်နမိတ်အကျယ်အဝန်း(see old town area) မှာ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်သုံးလုံးတောင်ရှိခဲ့တာ မြန်မာမင်းများလက်ထက်က religious tolerance ကတော့ အံ့သြစရာပါပဲဗျာ။ ၁၈၅၃ခုနစ်ထုထ် Mr. Colesworthy Grant ရဲ့ မူရင်းစာအုပ်Rough Pencillings of A Rough Trip to Rangoon in 1846 ကို ဖတ်ချင်သူများ ဒီမှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ Hard Copy ဖတ်ချင်ရင်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံ White Orchid Press က ၁၉၉၅မှာပြန်ထုတ်ထားတာရှိပါသည်။
This entry was posted on September 1, 2013 at 9:45 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.